From Beginner to Professional - MYSTERY ZILLION
April 2010 edited June 2010 in My Article
အမ်ဇက် သုံးနှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်နေ့ မှာ ဆွေးနွေးသွားတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးပါ။ အဲဒါကို ကျွန်တော် ဒီမှာ ပြန်ပြီးဆွေးနွေးချင်လို့ပါ။ အဲဒီနေ့က မမ်ဘာတွေက ထပြောရမှာ ရှက်တာနဲ့၊ ပြောရင် ထပ်မေးမှာကို ကြောက်ပြီး ထပြီး မပြောခဲ့ကြပါဘူး။ ဒီမှာတော့ ထိုင်ပြီးတော့ပဲ ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်။
ကျွန်တော် ကတော့ Professional မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော် ဒီကနေ့ အထိရောက်လာပုံလေးကို ကျွန်တော် ပြောပြမယ်နော်။
ကျွန်တော် တက္ကသိုလ် ဒုတိယနှစ် ရှေ့ပိုင်းကတော့ လျှို့၀ှက်ပေ့ါနော်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းကိုပြောပြမယ်။
ကျွန်တော် အဲဒီအရှေ့ပိုင်းတုန်းက ကွန်ပြူတာ ဆိုတာကို သိပ်မသိပါဘူး။ ကိုးတန်း တုန်းက Foundation တစ်ခုမှာ ကွန်ပြူတာ အခမဲ့ဆိုလို့ Word/ Excel တို့ကို နည်းနည်းပါးပါး တီးမိခေါက်မိလေးရှိပါတယ်။
10 တန်းဖြေပြီးတော့ Informatics မှာ Certificate ရအောင်လို့ဆိုပြီး Basic IT လေးတက်လိုက်ပါတယ်။ အဲ အရှေ့က ထက်တော့ နည်းနည်းပိုသိလာပြီ။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော် တို့ အိမ် ရှေ့လမ်း(ဗိုလ်တစ်ထောင် ဘုရားလမ်း) က New Century Resource Centre လေးမှာ Member ၀င်ပြီး တစ်နေ့2နာရီလောက် ကွန်ပြူတာသုံးပါတယ်။ အဲဒီမှာ သူငယ်ချင်း များများရပြီး ပိုသိလာပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ မှတ်မိသေးတယ် ကိုမင်းမင်း ဆိုတဲ့ အစ်ကိုကြီး ( Now @ MCC ) က Corel Draw လေးကိုသုံးပြီး နန်းတော်ပုံလေး ဆောက်ပြတယ်။ ကျွန်တော် အရမ်းကြိုက်သွားတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော် လျှောက်ဆွဲကြည့်တယ်။ ဒီဇီုင်းပိုင်းကို ပိုစိတ်၀င်စားလာတယ်။ ဒါနဲ့ကျွန်တော် Company တစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်တယ်။ အဲဒီက ရတဲ့ ၀င်ငွေနဲ့ ကျွန်တော် Graphic Design လေးတက်လိုက်ပြန်ရော၊ တော်တော်လေးသိလာတယ်။ ပြီးတော့ အလုပ်က ထွက် စာမေးပွဲဖြေ၊ ကျောင်းမှာ သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ ( 8vilboy) နဲ့သိတယ်။
ဒါနဲ့ သူတို့ အင်တာနက်ဆိုင်မှာ အလုပ်၀င်လုပ်ဖြစ်တယ်။ အဲဒီတုန်းက ကျွန်တော် Memory Stick ဆိုတာလည်း မသိဘူး။ ကျွန်တော် သိတာ Floppy Disk ပဲ။ ကျွန်တော် ဆီမှာတောင် အခု2ခုရှိသေးတယ်။ (ဟီး) အလုပ် စ၀င်တုန်းက ကျွန်တော် အရမ်း Q တယ်။ အရမ်းချက်တယ်။ နောက်ပိုင်း ကိုဇော်သူရိန် (itmen) မိတ်ဆက်ပေးလို့ Mysteryzillion ကိုသိခဲ့တယ်။ အရမ်းကြိုက်ခဲ့တယ်။ အရမ်းပျော်ခဲ့တယ်။ အခုအမ်ဇက် ပျော်တာ အဲဒီအချိန်ကိုမမှီဘူး။ ဘယ်တော့မှလဲရတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော် မချက်တော့ဘူး။ Html Dog က နေ Html စသင်တယ်။
အမ်ဇက် ကကြေငြာ လို့ မြန်မာ ၀ီကီ ပွဲသွားတယ်။ နောက် တစ်ပတ်နေတော့ ကိုစည်သူ နဲ့စသိတယ်။ ပြီးတော့ ကိုညမီးအိမ်။ အဲဒီအချိန် CSS စလေ့လာတယ်။ နောက်တော့ မရတာတွေကို ကိုစေတန် ကိုမေးတယ်။ ကိုကိုရဲ ကိုမေးတယ်။ တခြားလူတွေဆီကိုလည်း မေးသေးတယ်။ နောက်ပိုင်း Web Show မှာ အော်ဂနိုင်ဇာ ဖြစ်ခဲ့တယ်။
အမ်ဇက် ပွဲဆက်လုပ်တယ်။ 2009 January လောက်မှာ Php ကိုစလုပ်မယ်လို့ စိတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ကျသွားပြီ ကျွန်တော် ကျန်းမာရေးကြောင့် အလုပ်ကထွက်ရတော့မယ်။ အမ်ဇက်2နှစ် ပြည့်ကို ကူညီခဲ့တယ်။ မနှစ်က ပွဲ အရမ်းပျော်တယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော် မလျော့သေးပဲ American Center ကနေ Php အထူကြီးကို ငှားတယ်။ အိမ်မှာ ရအောင်ဖတ်တယ်။ ကိုယ်တိုင် စာအုပ်ထဲမှာ ကူးတယ်။ Practice လုပ်တယ်။ တော်တော်လေးရတယ်။ ကိုယ့်် ဟာကိုယ် အရမ်းအထင်ကြီးပြီး ကိုဇော် ကိုဆိုဒ်တစ်ခု ဆွဲပေးမယ်လို့ပြောတယ်။ ဒါပေမယ့် အကျကြီး ကျလေရဲ့။ ကျွန်တော် မနိုင်ဘူး။ ဒါနဲ့ လက်လျော့လိုက်တယ်။ နောက်တော့ ဘာမှမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူး။ အခုလောလော ဆယ်တော့ Linux က ကုဒ်တွေကိုလေ့လာနေတယ်။
ဒါကတော့ ကျွန်တော် ဘယ်လိုတက်လာခဲ့လဲ ဆိုတာကိုပြောတာပါ။ အမ်ဇက် က မမ်ဘာများကလည်း ကိုယ် ဒီအခြေအနေထိရောက် အောင်ဘယ်လိုတက်လာခဲ့တယ် ဆိုတာလေးကို တစ်ချက်လောက်ပြောပေးပါ။
ကျွန်တော် ထင်တယ်။ အခြေခံကနေတက်ဖို့အတွက် အောက်က အချက်တွေတော့ မဖြစ်မနေလိုတယ်လို့။
အင်တာနက် ဆိုင် တစ်ဆိုင်မှာ6လလောက် ဖြစ်ဖြစ် အလုပ်သင်ဖို့၊
သူငယ်ချင်းများကို ကောင်းစွာ ချိတ်ဆက်နိုမူ၊
မီးအမြဲတမ်း လာနေတဲ့ ကွန်ပြူတာ တစ်လုံးရှိဖို့၊
ကဲ...အခုကျွန်တော့်အလှည့်ပေါ့....။ ကျွန်တော့်တုန်းကတော့...8 တန်းနှစ်မှာ ကွန်ပျူတာဆိုတာနာမည်ကြီးလာတယ်ဗျ...သင်တန်းတွေဘာတွေဖွင့်လို့ ကြော်ငြာတာတွေကို မြင်ခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ကွန်ပျူတာဆိုတာကို....လက်နှိပ်စက်နဲ့တီဗီကြီးနဲ့တွဲထားတာလို့ ထင်ထားတာဗျ...ဟီး.(ရှက်ဖို့လည်းကောင်းပါတယ်)။
ဒီလိုနဲ့ ကိုးတန်းရောက်တော့...MCC မှာ Computer Basic ကို သွားတက်ခဲ့တယ်..အဲဒီ့တော့မှ ကွန်ပျူတာဆိုတာကြီးကို စမြင်တွေ့ဖူးတာ ဟီး...ဟီး...။ ဒီလိုနဲ့...ကွန်ပျူတာမှာ ဘာသင်တန်းတွေထပ်ရှိလည်းသိချင်လို့ ထပ်စုံစမ်းတယ်...။ ဒါပေမယ့် 10 တန်းမအောင်သေးလို့ မတက်ခဲ့ရဘူးလေ။
ဒီလိုနဲ့ပဲ...10 တန်းအောင်....အလုပ်ခွင်ကို စ၀င်ပြန်တော့...ကွန်ပျူတာ Design ပိုင်းကို တတ်လားတဲ့....ကဲ...ဒီကကောင်က ကွန်ပျူတာဆိုတာကို ဘယ်လို ဖွင့်ရတယ်၊ ပြီးတော့ MS word တို့ MS Excel တို့လောက်ပဲသိတာလေ ကျန်တာတွေတော့သိဘူး။ ဟီး....လူကြီးကလည်း သဘောကောင်းပါတယ် MS powerpoint နဲ့ ပဲ အလုပ်ခန့်တယ်။ slide presenter အဖြစ်ပေါ့။ နောက်ပိုင်းတော့...ကွန်ပျူတာတွေရဲ့တည်ဆောက်ဖွဲ့စည်းပုံကို စိတ်၀င်စားလာတယ် ဒါနဲ့ပဲ Hardware engineer သင်တန်းကို MCC မှာ တက်ဖြစ်တယ်။ မကျေနပ်သေးတာနဲ့ Informatic မှာ ထပ်တက်တယ်။ ကွန်ပျူတာတွေရဲ့ တည်ဆောက်ပုံကို သိခဲ့ပြီးတော့....ကိုယ့်ကိုကိုယ် ငါကွ လို့ အထင်ကြီးနေတဲ့အချိန်မှာမှ windows system တွေရဲ့ ကွဲပြားခြားနားပုံကို တိတိကျကျ တွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့...ကိုယ့်ကိုကိုယ် သိမ်ငယ်စိတ်တောင်၀င်လာမိတယ်လေ။ (ငါသိတာ...ဘာမှမဟုတ်ပါလားလို့)
နောက်ပိုင်းမှာတော့ Networking ပိုင်းကို ဆက်ပြီးလေ့လာဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း တကယ်စိတ်၀င်စားတာက hardware အပိုင်းပဲ။ အဲဒီ့အချိန်မှာ ကိုဇော်သူရိန်ရဲ့ Itmen blog ထဲမှာ သိတာလေးတွေ၀င်ဖြေရင်း၊ လေ့လာရင်းနဲ့.. MZ ကို စသိခဲ့ရခဲ့ပါတယ်။ MZ ပွဲကို တော့ တက်မယ်...တက်မယ်နဲ့...အလုပ်က မအားတာနဲ့ မတက်ဖြစ်ခဲ့ရဘူး။ တက်ဖြစ်တဲ့သူငယ်ချင်း ညီအစ်ကိုတွေကို အားကျမိပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့...Internetcafe ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်မှာလုပ်ရင်း.....နဲ့ linux ပိုင်းကို ဆက်လေ့လာနေပါတယ်။
ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ အောက်ခြေကနေတက်လာပုံပါပဲ ဟီး
အထက်မှာ ဂျစ်ပစီလေးပြောခဲ့သလိုပါပဲ အခြေခံကနေတက်ဖို့အတွက် အောက်က အချက်တွေတော့ မဖြစ်မနေလိုတယ်လို့။
သူငယ်ချင်းများကို ကောင်းစွာ ချိတ်ဆက်နိုင်မူ၊
မီးအမြဲတမ်း လာနေတဲ့ အိမ်မှာ ကွန်ပြူတာ တစ်လုံးရှိဖို့ပေါ့။
သူများတွေပြောလို ့ကျွန်တော်လည်း၀င်ပြောလိုက်ဦးမယ် ကျွန်တော်တုံးကတော့ ကျွန်တော်ဆယ်တန်းအောင်တုံးကတော့ ကွန်ပျုတာကို ဂိမ်းဆော့ရတဲ့အရာလို ့ကလွဲရင်ကျန်တာကိုဘာကိုဘာမှမသိတာပါ အမှန်အတိုင်းပြောရင် အဲဒီတုံးကလည်းစိတ်ကိုမ၀င်စားပါဘူး သေသေကြေကြေ တစ်နေလုံးလိုလိုဂိမ်းဆိုင်မှာရှိတယ်လို ့ပြောလို ့ရတာပေါ့ဗျာ ကျွန်တော်သိသလောက်တော့ chat ကနေ web ကို ကူးပြောင်းလာတဲ့သူနဲ့Game ကနေ web ကိုကူးပြောင်းလာတဲ့လူလို ့ခွဲြ့ခားသတ်မှတ်ရင်
ကျွန်တော်က ဂိမ်းဘက်ကပြောင်းလာတာလို ့ပြောရမှာပေါ့ဗျာ (ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ဂိမ်းဆော့မဆော့ကတော့ pyaepxyoaung ကိုသာမေးကြည့်ပေတော့ :P ဆယ်တန်းလည်းအောင်ရော လူက ဘယ်လိုကနေဘယ်လိုဖြစ်လို ့လဲမသိ ကွန်ပျုတာတက္ကသိုလ်ရောက်တော့တာပဲ အဲဒီမှာစဂွကျတာပဲ ဘာတွေမှန်းလဲမသိဘူး တခါမှမမြင်ဘူးတာတွေ့မြင်ရ တခါမှမသင်ဖူးတာတွေသင်ရင်းနဲ ့ပဲ ကွန်ပျုတာကို စိတ်၀င်စားသလိုလိုဖြစ်ပြီး ကွန်ပျုတာနယ်ပယ်ထဲကို ချော်တော်ငေါ့ပြီး ရောက်လာတယ် ပြောရမှာပါပဲ :P ကျောင်းစာကလည်းတော်သလားမမေးနဲ့အောင်တယ်ဆိုရုံပဲ အဲဒါအခုထိပဲ အပြင်သင်တန်းဆိုတာကလည်း A+ ရယ် BSE ရယ်ကိုပဲ KMD မှာတက်ဖူးတယ် နောက်တော ကျွန်တော် ကျုရှင်တက်တော့ ကျွန်တော်တို ့ကျုရှင်ကဆရာမကစကားစပ်ရင်းနဲ ့ကိုစေတန်တို့ဘလော့ အကြောင်းပြောရင်းနဲ ့ဘာနဲ ့အဲဒီတုံးကလည်း ကိုစေတန်ကလည်း ဘလော့ရေးခါစနေမှာပေါ့ သေချာတော့မမှတ်မိတော့ဘူး အဲဒီတုံးကလည်း ကိုယ်ကလည်းကိုယ်ကျောင်းကို နည်းနည်းအချဉ်ပေါက်နေတာနဲ ့ကိုယ်ကျောင်းနဲ ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ေ၀ဖန် တာတဲ့ဆောင်းပါးတွေအင်မတန်သဘောကျတာ :P
အဲဒါနဲ ့ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်း ကျွန်တော်အင်တာနက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရောက်တော့ zawgyi မရှိတာနဲ ့ကိုစေတန်ဆိုဒ်မှာ ဒေါင်းတာ MZ ကို redirect လုပ်လိုက်တာနဲ ့MZ ကိုစသိတာပဲ စသိသိချင်းဒီ nick မဟုတ်ပါဘူး အဲဒီတုံးက activate လုပ်ရကောင်းမှန်းမသိလို့post တောင် reply လုပ်လို ့မရခဲ့ဘူး (အဲဒီလောက်ပိန်းတာ) အဲဒါနဲ ့
MZ မှာ Guest အနေနဲ ့တစ်နှစ်လောက်ဖတ်ပြီးမှ Member စလုပ်ဖြစ်တာပါ ဘာပဲပြောပြော MZ နဲ ့ပတ်သက်ပြီးမှ အများကြီးသိချင်တာတွေ အထူးသဖြင့် အူဘွန်တူအကြောင်း သိခွင့်ရတာကျေးဇူးတင်ပါတယ် အခုတော့ wordpress တို ့ဘာတို ့စစမ်းနေတယ် ဘာလုပ်ရမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူး ဘာမှမတက်တဲ့သူကို
Beginner လိုသာပြောကြေးဆို ကျွန်တော်လည်း Beginner ပါပဲ :P MZ ရဲ ့သက်တော်ရှည် Beginner အကြီးစားကြီးပေါ့
ဂျစ်ပစီလေးက စတော့ ကျွန်တော်လည်း ပြောရတာပေါ့။
ကျွန်တော်ကတာ့ ဆယ်တန်းအောင်ကတည်းက ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတာနဲ့ ကွန်ပျူတာ တက်ဖြစ်တဲ့သူပါ။ MCC မှာ Beginner ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ စတက်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တော့ Excel ဆိုတဲ့ အတန်းတက်ပါတယ်။ နောက်တော့ MCC နဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ တွဲဖွင့်တဲ့ Level III တက်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တော့ IDCS နောက်တော့ IADCS အဲဒီလို တက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အထည်ချုပ်စက်ရုံတစ်ရုံမှာ ကွန်ပျူတာ အော်ပရေတာ လုပ်ဖူးပါတယ်။ MCC မှာ System Analyst လုပ်ဖူးပါတယ်။ နောက်တော့ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းပဲ လုပ်တော့မယ်ဆိုပြီး အလုပ်တွေ ထွက်လိုက်ပါတယ်။ အစကတော့ Software House ထောင်မယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် တကယ်တန်း လုပ်ဖြစ်တော့ DTP ပါပဲ။ ဒီလိုနဲ့ DTP ကို သုံးနှစ်လောက်လုပ်ပြီး ကိုယ်ပိုင်သင်တန်း ဖွင့်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ သင်တန်းဖွင့်တာ ငါးနှစ်လောက်ရှိပေမယ့် တိုးတက်မှုတော့ သိပ်မရှိသေးပါဘူး။ ခုတော့ WBTS က M.Sc (Computer Science) တက်နေပါတယ်။
အစကတော့ သင်တန်းတွေ တစ်ခုပြီး တစ်ခုတက်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ Self-learner ဖြစ်နေပြီလို့ ပြောရမှာပါပဲ။ ကိုယ်တိုင် လေ့လာသင်ယူရတာ ပိုပြီး နှစ်သက်ပါတယ်။ ခုထက်ထိ ကျိုးစားတုန်းပဲ။ Pro ဖြစ်ပြီလားဆိုတော့ ဖြစ်လိုက် မဖြစ်လိုက်ပါပဲဗျာ ....
ကျွန်တော်က တော့ ကွန်ပြူတာဆိုတာကို9တန်းလောက်က စသိတာပါ။ အစကတော့ ဘာမှန်းမသိ ကျွန်တော့်အစ်ကိုက သူ့ ကောင်မလေးနဲ့ gမေးလ် ပြောချင်တဲ့အချိန် ကျွန်တော့်ကိုခေါ်ပြီး အပြင်အတူတူ ထွက် နောက်ကျွန်တော့်ကို ကြွား တယ်။ အဲ့ဒီလိုကနေ ကွန်ပြူတာ၊ အင်တာနက် ဆိုတာကို သိရတာပါ။ နောက် 10တန်းအောင်တော့ ဘာတက်ရမှန်းမသိ ဖြစ်ပြီး အစ်ကို့ ကို ကြည့်မရတာနဲ့ အင်တာနက်ဆိုင်ကို သွားပြီး e-mail, internet အသုံးပြုပုုံကို ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီး ရှင်းပြ ခိုင်းရင် အူလည်လည်နဲ့ မတောက်တစ်ခေါက် သိလာရတယ်။ သိသိချင်းကျွန်တော်လဲ ဘယ်ရမလဲ ကျူတာပေါ့။ 10တန်းမေဂျာလျှောက်တော့လဲ သူများ အီးမေဂျာဆိုလို့ ကိုလဲအီးအီး နဲ့ ဖြစ်နေရာက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ဒဂုံတက္ကသိုလ်မှာ computerscience မေဂျာအသစ် ရှိတယ်လို့ လာပြောတော့ ဘာမှန်းမသိ သူငယ်ချင်းဆွယ်လို့ လျှောက်ခဲ့ရတယ်။ ကျောင်းမတက်ခင်မှာ company တစ်ခု က entry သမားတစ်ယောက်လိုတယ်ဆိုလို့ data entry သွင်းရင်း အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ် အလုပ်လုပ်တော့programming ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေ ပြီးတော့ web-design သမားတွေကိုတွေ့ရော သူတို့လိုဖြစ်ချင်လာတယ် နောက်ပိုင်း ကျောင်းတက်ရင်း ကွန်ပြူတာ အကြောင်းပိုသိလာ တယ် ဒုတိယနှစ်မှာကျောင်းစာတွေမလိုက်နိုင်လို့ KMDမှာ IDCS တက်ခဲ့တယ် တစ်ကယ်ပြောရရင်တော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဉာဏ်ရည် အားနည်းမှုကြောင့် လားတော့မသိပါဘူး ဘားမှ ရေရေရာရာ မသိခဲ့ပါဘူး။ တတိယနှစ်ရောက်တော့ web-site တစ်ခု စီ အဖွဲလိုက်ရေးရတယ် ကျွန်တော်က အဖွဲ့ကို ခေါင်းဆောင်ပြီး ရေးခဲ့တယ် html ,css ပေါ့ local လေးပါပဲ ကျွန်တော့်အဖွဲ့က ဘယ်သူမှ မလုပ်ချင်ကြဘူး ကျွန်တော့ကို ပဲတွန်းလွှတ်တယ်။ ကျွန်တော် နေ့ရော ညရော ရေးတယ်(မှတ်ချက်။ ။ ၀ိုးတ၀ါးရေးသည်) တစ်ခါတစ်လေ ထမင်းစားဖို့မေ့တယ် လူလည်းပိန်ချုံးနေတာပဲ (မှတ်ချက်။ ။၊လူအထင်ကြီးအောင်ပြောဆိုသည်) ရလဒ်ကောင်းခဲ့တယ် ကျွန်တော့်အဖွဲ့ အမှတ်အများဆုံးရခဲ့တယ်လေ။ အဲ့ဒိနောက် ကိုယ့်ကိုကို အထင်ကြီးသွားပြီး ဆက်မလေ့လာချင်တော့ဘူး webဆိုတာ ဒါလေးပါပဲလို့ထင်ပြီး အခြားအလုပ်လုပ် ပြောင်းလုပ်ဖြစ်တယ်။ အကြောင်းအရင်းသည် ကျွန်တော့်မှာ ကွန်ပြူတာပညာနှင့်ပက်သတ်ပြီး သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းနည်းသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ခုနောက်ပိုင်းmz member တွေနဲ့တွေ့ပြီး ကိုယ်ဘားမှမဟုတ်ဘူး ဆိုတာသိလာတယ် ခု စိတ်သေသေချာချာ ဆုံးဖြတ်ထားတယ် web-developing ပိုင်းပဲလေ့လာတော့မယ်။ ခုတော့ self-study လုပ်နေတုန်းပါ။ ကျွန်တော်က ဘားမှမဟုတ်တဲ့သူတစ်ယောက် (beginner) သမားတစ်ယောက်ဆိုတာ ခုတော့သိလာ ပါပြီ........ professional အဆင့်တက်ဖို့ ကျွန်တော် ကြိုးစားရပါအုန်းမယ်.......
အချိန်ရရင်တော့ ကျနော်လဲ ၀င်လက်ဆော့ပါဦးမယ် ... :d
My Beginner to Beginner Life
MZ နဲ့ပွဲဆိုရင် ကျွန်တော်က ဘယ်တော့မှ မတက်ရသလောက် ဖြစ်နေတော့ ဒီအပေါ်ကနေပဲ ပြောတာပေါ့။ ကွန်ပျူတာဆိုတာ ငါးတန်းရောက်တော့ စသုံးဖူးတာပဲ တစ်လုံးက Floppy ထည့်ပြီး Boot လုပ်ရတယ် တစ်လုံးက Hardrive ပါတယ်။ စက်နှစ်လုံးလုံး51/4 Floppy တွေသုံးပါတယ် Windows မရှိပါ DOS ပဲရှိပါတယ်။ ငါးတန်းကျောင်းသားဆိုတော့ ဘာမှမသုံးတတ်ပါ သို့ပေမယ့် ဂိမ်းနှိပ်ပါတယ် စက်ကိုခလုတ်ဖွင့် C:> လေးပေါ်လာရင် cd game လို့နှိပ် ပြီးရင်တော့ kingkong, tetris စသည်ဖြင့်နှိပ်လိုက်ရင် ဆော့လို့ရမှန်းသိပါတယ်။ Game ဆော့ရင်း ဟိုထဲဘယ်လိုသွား ဒီအထဲဘယ်လိုဝင် မေးရင်နဲ့ လုပ်လာတာ DOS Command တွေ ဘယ်လိုလုပ် မှတ်မိသွားမှန်း စဉ်းစားလို့မရတော့ပါဘူး။
ခြောက်တန်းအောင်တော့ တစ်ခြားနေရာကိုပြောင်းတော့ Windows ပါတဲ့စက်ကို စမြင်ဖူးပါတယ် Windows 3.1 တင်ထားတယ် ကွန်ပျူတာဆိုတော့ Game ဆော့ဖို့လို့ ခံယူထားသလိုပဲ ထပ်ဆော့ပါတယ် အဲဒီ့အချိန်ကတော့ ဂိမ်းလည်းသိပ်မစုံပါဘူးလေ ဖဲစီတယ် မိုင်းရှာတယ် Minesweeper ဆိုရင် အားနေရင် ကိုယ့်စံချိန်ကိုယ် ပြန်ချိုးအောင်ကစားနေလို့ ရမ်းနှိပ်ရမယ့် အခြေအနေတောင် ဘယ်နေရာနား မိုင်းရှိတယ်ဆိုတာ မှန်းကြည့်ရင် သိသလိုတောင်ဖြစ်လာပါတယ်။ :P Word & Excel ကတော့ အဖေဖြစ်သူကို စာကူရိုက်ပေးရလွန်းလို့ ရိုက်တတ်တယ်။ Word & Excel ဘယ်လိုသင်သလဲဆို Application ကိုဖွင့်လိုက်တယ် စာရိုက်ကြည့်တယ် Toolbar က ခလုတ်တွေ တစ်ခုချင်း အကုန်စမ်းနှိပ်တယ် Menu တွေဝင်ကြည့်တယ် အဲဒါမှဘာမှန်မသိရင် Word & Excel ကို Manual စာအုပ်ကြီးရှိပါတယ် အဲဒါကိုလှန်ကြည့်တာပဲ ဒီလိုနဲ့ပဲ အဆင်ပြေသလို ရိုက်တတ်သွားတာပဲ။ ကလေးဆိုပြီး အင်္ဂလိပ်လို ဘယ်လိုဖတ်သလဲမေးရင် လုံးစေ့ပတ်စေ့တော့ ဘယ်နားလည်ပါ့မလဲ အတန်အသင့် နားလည်ပါတယ် ကွန်ပျူတာအကြောင်း ရေးတဲ့အင်္ဂလိပ်စာဟာ ခက်တာမှမဟုတ်တာ နောက်ပြီးတော့ ပုံပါနေတာပဲ ရမ်းနှိပ်ကြည့်ရတာပဲ။ :P
၈ တန်း ၉ တန်းလောက်တော့ Window 95 ပါတဲ့စက်ကို စသုံးဖူးပါတယ်။ ၁၀ တန်းအောင်တော့ ညီဝမ်းကွဲတစ်ယောက် ကွန်ပျူတာသင်တန်းတက်တာ အဖော်မရှိလို့ လိုက်သွားရပါတယ် အရှေ့ကသင်ချင်ရာသင် အနောက်ကနေ ဆော့ချင်ရာပဲဆော့ပါတယ် သူသင်တဲ့စာရိုက်တာက မဟုတ်လည်း ရိုက်တတ်နေတာပဲ ဆရာမများက ကျွန်တော်ဆော့မရအောင် ဂိမ်းတွေထားတဲ့ Folder တွေကို Hidden လုပ်ပြီး ဖွက်ကြပါတယ် DOS နဲ့ဖက်ပြီး အသက်ဆက်လာတော့ ဘယ်လိုဖွက်ဖွက် dir command ကို အမျိုးမျိုး သုံးတတ်လေတော့ ဖွက်မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဖွက်သလို ကျွန်တော် attrib နဲ့လုပ်မရလို့ နည်းနည်းထူးဆန်းရာကနေ သူတို့ Novell Netware သုံးထားတယ်လို့ ကြားမိတော့ အိမ်က Novell Netware စာအုပ်ကို ဖတ်ပြီး command တွေကိုစမ်းပါတယ်။ သူတို့အရှေ့က သင်ချင်ရာသင် အနောက်ကနေ ကျွန်တော် command ပေါင်းစုံနဲ့ စမ်းသပ်လိုက်တာ အတန်းသာပြီးသွားတယ် ဘာစာတွေ သင်လိုက်မှန်း မသိလိုက်ပါဘူး။ :P
တက္ကသိုလ်စတက်တော့ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ကို အခြေအနေအရေ ပြောင်းရွှေ့လိုက်ပါတယ် တစ်ကယ်က ငယ်ကတည်းက ဝါသနာပါတဲ့လမ်းမဟုတ်ပါ။ ဝါသနာမပါပေမယ့် ရောက်မှတော့ ဝါသနာကိုပါလိုက်ပါတယ် :P Programming သင်ခဲ့တာတွေအရင် ပြောရမယ်ဆိုရင် ပထမနှစ်မှာ C Programming ကိုလေ့လာပါတယ် ဘယ်သင်တန်းမှလည်းမတက်ပါ စာကြည့်တိုက်ရှိရင် ကျွန်တော့်အတွက် လုံလောက်ပါတယ်။ စာအုပ်တွေငှားလွန်းလို့ စာကြည့်တိုက်မှူးနဲ့ ဘော်တာဖြစ်တာ တစ်ခါတစ်လေ စာအုပ်မရှာမတွေ့ရင် ဘယ်ဘီဒိုမှာရှိသလဲ ကျွန်တော့်ကိုသူပြန်မေးရပါတယ်။ Programming သင်တဲ့ဆရာမကို ငြင်းစရာခုံစရာ ဘော်တာတစ်ယောက်လို့ သဘောထားတယ်။ နောက်တော့ Visual Basic ကို ဒုတိယနှစ်လောက်မှာ စပြီးလေ့လာတယ် Object Orient Programming အဖြစ်ကတော့ C++ ကိုလည်းဆက်ပြီး လေ့လာနေပါသေးတယ်။ တတိယနှစ်လောက်ရောက်တော့ ပရောဂျက်တင်ရမယ်ဆိုတော့ Visual Basic ပဲပိုလေ့လာဖြစ်ပါတယ် Power Builder လည်းလုပ်ဖြစ်လိုက်သေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဝါသနာအရ System Programming အဖြစ် C, C++, Assembly တွေကတော့ ဖတ်နေဆဲပါပဲ။ နောက်တော့ Programming Language ဆိုတာ အထူးအဆန်း မဟုတ်တော့သလို ဖြစ်လာတယ်။ Java နဲ့ C# လေ့လာချိန်မရှိဘူး သူများကို တစ်လဘယ်လောက်ပေးဆိုပြီး Java နဲ့ C# အငှားလိုက်သင်ပေးရင်း တတ်သွားတာ :P PHP နဲ့ Python ကတော့ အလုပ်တွေလာအပ်လို့ အဲဒါတွေနဲ့ပဲရေးရမယ်ဆိုလို့ စာအုပ်ဖတ်ပြီး ရေးရင်းနဲ့ အလုပ်လည်းပြီး ပိုက်ဆံလည်းရ Language နှစ်ခုလည်း အဖတ်တင်သွားတာပါ။
Software Engineering နဲ့ ပါတ်သက်ပြီးတော့ လေ့လာခဲ့တာတွေကတော့ ဒုတိယနှစ်လောက်က SE စပြီးသင်တာကစပါတယ် စာအုပ်ထဲကအကြောင်းအရာတွေကို အပြင်ကအလုပ်နဲ့ ဆက်စပ်ကြည့်တာပါ သူ့အထဲက Model တွေကိုစဉ်းစားကြည့်တယ်။ SE နဲ့ပါတ်သက်ပြီး ပိုပြီးလက်တွေဆန်လာတာတွေ လေ့လာဖြစ်တာက Object-Oriented SE ကိုဖတ်ဖြစ်လို့ပါ Programming ကို အသေအလဲလုပ်ချိန် ဖြစ်လေတော့ OOSE ဟာ ကျွန်တော့်အတွက် ပိုပြီးတော့ လက်တွေ့ဆန်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Software Architecture တွေကိုပိုပြီး လေ့လာဖြစ်ပါတယ် ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေး Business Model ကို Object-Oriented Analysis လုပ်တာကို အလွန်စိတ်ဝင်စားလို့ တွေ့သမျှအကြောင်းကို UML နဲ့ Model ဆွဲကြည့်တယ် Data Architecture ဆောက်ကြည့်တယ် Client System တွေကို စိတ်နဲ့ Design လုပ်ကြည့်ပါတယ်။ Visual Basic နဲ့ Distributed Programming လေ့လာတော့ Application Layering Model တွေပုံစံအတော်များများ လက်တွေ့စမ်းစရာ ရသလိုဖြစ်သွားတယ်။ ဘာတွေဖတ်ခဲ့ရသလဲဆိုတော့ SE, Object Oriented Analysis, UML, Data Modeling ဒါတွေ ဖတ်ခဲ့ရတယ် အဲဒါတွေ လက်တွေ့ စမ်းဖို့အတွက်က COM, DCOM, CORBA နောက်ပြီး Messaging Server တွေ Application Server တွေတော်တော်များများ စမ်းသုံးခဲ့ရဖူးတယ်။ ဒုတိယနှစ်နောက်ပိုင်းကနေ ဂုဏ်ထူးတန်းလောက်အထိ အဲဒါတွေနဲ့လည်နေတာပါ။
သီးသန့်အနေနဲ့ စိတ်ဝင်စားတာကတော့ Data Structure & Algorithm Analysis ပါ တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော် Database နဲ့ပါတ်သက်ပြီး အရေးများလို့ ဒီလူကြီးက Database သမားလို့ပြောတယ် အဲလိုမဟုတ်ပါဘူး Database Theory ကကျွန်တော်အနေနဲ့ SE မှာလေ့လာတာပါ Database Server တွေအကြောင်း နားလည်နေတာက ကျွန်တော်က Data Structure ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူဖြစ်လို့ Data ကို Memory မှာ Storage လုပ်ပုံ Access လုပ်ပုံတွေ Disk ပေါ်မှာ Storage လုပ်ပုံ Access လုပ်ပုံတွေ အများကြီးလေ့လာဖူးလို့ နားလည်နေတာပါ။ ဒါ့ကြောင့် Database Server တစ်ခုရဲ့ Internal Structure ဘယ် Data Structure သုံးသလဲသိတာနဲ့ အဲဒီ့ Algorithm တွေရဲ့ အကျိုးအပြစ်ကိုသိပါတယ် ဒါ့ကြောင့်နားလည်တာပါ Database အကြောင်းပဲသိတဲ့လူဟာ အဲဒါတွေ အသေးစိတ်နားမလည်နိုင်ပါဘူး။ ဒါတွေကတော့ ပထမနှစ်လောက်ကနေစပြီးတော့ တတ်တဲ့ Programming Language တွေနဲ့ Data Structure တွေ Algorithm တွေကို Implement လုပ်ကြည့်တယ် ဘယ်ဟာက ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာ ယှဉ်ကြည့်တယ် စသည်ဖြင့်စခဲ့တာပါ။ အခုအချိန်အထိလည်း Data Structure & Algorithm Analysis ကိုအထူးစိတ်ဝင်စားလို့ လေ့လာနေဆဲပါပဲ အခုအချိန်မှာတော့ ခေတ်တွေကပြောင်းသွားတော့ Distributed အလုပ်လုပ်တဲ့ Algorithm တွေရဲ့အကြောင်းကိုပဲ ပိုစိတ်ဝင်စားပါတယ် ကြုံရင်ကြုံသလိုလည်း အခုထိလေ့လာနေဆဲပါပဲ။
ကျွန်တော်လေ့လာပုံက လူအများလေ့လာပုံနဲ့အတော်လေး ကွဲပြားပါတယ်။ အများပြောသလို သူကတော့ Web သမား၊ Window သမား၊ Networking သမား၊ Open-Source သုံးတဲ့လူ စသည်ဖြင့် အမြင်မျိုးမရှိပါဘူး အဲဒီ့အရာတွေဟာ Software System တစ်ခုရဲ့ သင့်လျော်ရာထည့်သွင်းရမယ့် အစိတ်အပိုင်းတွေ အဖြစ်ပဲမြင်ပါတယ်။ ရှည်ရှည်လျားလျား ရေးထားတာက Programming Language တတ်တယ်ဆိုတာရဲ့ နောက်မှာရေးတယ်ဆိုတာထက် အများကြီးကျယ်ပြန်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ သိစေချင်တာပါ ဒါ့ကြောင့်လုပ်ခဲ့ရသမျှ မှတ်မိသလောက် ရေးထားပါတယ်။ အပေါ်မှာပြောခဲ့တာတွေကတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ Beginner ဘဝကနေ အခုလက်ရှိ Beginner ဘဝအထိအခြေအနေပါ။ Beginner ပြီးတော့ ကျွန်တော် Beginner ပြန်ဖြစ်တာက တစ်ခုတတ်မယ်မကြံသေးဘူး နောက်တစ်ခုကို ထပ်လေ့လာရပြန်တယ် ဒီလိုနဲ့ Beginner ပြန်ဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျွန်တော်လည်း ဒီတစ်သက်တော့ Professional ဖြစ်နိုင်တော့မယ်မထင်ပါဘူး။
[ Off Topic ] အင်းပေါ့.. Beginner တင်မကဘူး လူပျိုကြီး ဆက်ဖြစ်နေဦးမှာ :P
ကျွန်တော်လည်း ၀င်ပြောလိုက်မယ်။ ကျွန်တော်လည်း ကွန်ပျုတာကို ၇ တန်းစာမေးပွဲဖြေပြီးချိန်လောက်မှ သုံးဖြစ်တယ် ။ စစချင်းတက်တဲ. သင်တန်းကတော. KMD မှာ ကွန်ပျုတာ basic .. word ,excel ,powerpoint လေးတက်တယ်။ အဲ...ကျွန်တော်လည်း အပေါ်က အစ်ကိုတွေပြောခဲ.တဲ.အတိုင်းပဲ ကျွန်တော်လည်း ဂိမ်းကိုပဲကောင်းကောင်း သုံးတာ ။ ကွန်ပျုတာဆိုတာကိုလည်း ကျွန်တော်က ဂိမ်းဆော.ဖို.ထွင်ထားတယ် လို.ပဲထင်ထားတာ ။ကျွန်တော်ဆို ကွန်ပျုတာဆိုတာ window နဲ.ပဲသွားတယ်ထင်နေတာ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာကလဲ တခြား OS တွေကိုအသုံးနည်းတော. အဲလိုပဲ သိထားတယ်။ အဲ ...ဒီလိုနဲ.ပဲ ကျွန်တော် ကွန်ပျုတာဆိုတာ ဘယ်လိုဖွဲ.စည်းထားမှန်းမသိသေးတဲ.အချိန်မှာပဲ ကွန်ပျုတာတက္ကသိုလ် တက်ဖြစ်တယ်။ ဘာမှတော. သိလို.လဲမဟုတ်ဘူး။ ကွန်ပျုတာဆိုတာကြီးကိုလည်း စိတ်မ၀င်စားသေးဘူး ။ ကျောင်းရောက်တော. ဟိုဟာကနည်းနည်း ဒီဟာလေးနည်းနည်းနဲ. ကျွန်တော် ကွန်ပျုတာကို နည်းနည်းစိတ်၀င်စားလာတယ် ။ programming ဆိုတာလေးကိုလဲ ဆရာမတွေက ဆရာတွေက ထိတွေ.ပေးခဲ.သေးတယ်။ ကျုရှင်ဆရာကြောင်.လည်း ကျွန်တော်program ေ၇းရတာ နည်းနည်းကြိုက်လာတယ်။ဘာကြောင်.မှန်းတော. မသိဘူး ။ ဒါပေမဲ. ကျွန်တော် အိုင်တီ ပိုင်းကိုထဲထဲ၀င်၀င် စိတ်၀င်စားလာအောင် လုပ်ပေးလိုက်တာ ကတော. ကျွန်တော်.သူငယ်ချင်း star lay ပါ။ first year မှာ သူနဲ. ကျွန်တော် ကောင်းကောင်းပေါင်းမိတော. သူ.ကို ကျွန်တော်အားကျသွားတယ် ။ ကိုယ်က ကွန်ပျုတာ တက္ကသိုလ်ကြီးတက်နေပြီး ဘာမှမသိသေးချိန်မှာ သူ(star lay )က ထဲထဲ၀င်၀င်ရှိနေပြီ။ ကျွန်တော် အိမ်မှာ ကွန်ပျုတာသုံးရင် နဲ. ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်လို. သူ.ကိုမေးလိုက်တိုင်း အကုန်သိနေတဲ. သူကို ကျွန်တော် တော်တော်အားကျသွားတယ် ။ အဲ. အချိန်က စပြီး ကျွန်တော် ကွန်ပျုတာနည်းပညာနဲ. ပက်သက်တဲ. ဖိုရမ်တွေကို လိုက်ဖတ်တယ်။ MZ ကို ကျွန်တော်နည်းနည်းသဘောကျသွားတယ်။ မိသားစုတစ်ခုလို ရင်းရင်း နှီးနှီး ပြောနိုင်တဲ. သူမရှိပေမဲ. နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက် တွေကို ကျွန်တော် ကြိုက်သွားတယ် ။ ဒီက thread လေးတွေ ကိုလိုက်ဖတ် လိုက်ကြည်.ရင်းကိုယ်.ကိုကိုယ် သိလိုက်ရတာက ကျွန်တော်ဟာ system ပိုင်းကို စိတ်၀င်စားမှန်း သိလိုက်ရတယ်။ ကျောင်းကစာမေးပွဲ ကြောင်. ကျွန်တော် programming ကို လေ.လာနေရပေမဲ. ကျွန်တော် ကျောင်းတက်ခါစကလို စိတ်မ၀င်စားတော.ဘူး။ ကျွန်တော်လည်း beginner ကနေ တက်ဖို.အတွက် တစ်ခုခုထဲကိုပဲ ကောင်းကောင်းလေ.လာနေရတယ်။ pro ဖြစ်ဖို. ကိုတော. ကျွန်တော်မတွေးထားသေးဘူး ။ ပေါ.ပေါ. ပါးပါးလေးပဲ သွားနေချင်သေးတယ်။
အဲ beginner အဆင်.ကနေတက်ဖို.အတွက် လိုတာလေးတစ်ခုကို ပြောရရင်တော.
ဂိမ်းဆော.လို.မရတဲ. စက်ကို ၀ယ်ပါလို.ပဲ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ဘာလို.လဲဆိုတော. ကျွန်တော်လို.ပဲ ဂိမ်း only ပဲ ထိုင်ဆော.နေမိမှာ စိုးလို.ပါ။
အင်း ကျွန်တော့်အလှည့်ရောက်လာပြီထင်တယ် ....
ကျွန်တော် ၁၀ တန်းပြီးရင် ဘာတက္ကသိုလ်တက်မယ်ဆိုပြီး ရည်မှန်းထားတာရှိတယ်ဗျ ... ကွန်ပျူတာပိုင်းတော့မဟုတ်ဘူး ... ရေကြောင်းတက္ကသိုလ် တက်မယ်ဆိုပြီး ကြိုးစားဖြစ်တယ် .. ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့နှစ်မှာ အဲဒီတက္ကသိုလ်ကို ရှောက်တဲ့သူများပြီး ကျွန်တော် ပြုတ်ခဲ့တယ် .. အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း တစ်ခြားဘာတက္ကသိုလ်တွေမှီသေးလဲလို့ စုံစမ်းကြည့်တော့ တစ်ခြား ဆေးလိုင်းတွေလည်းစိတ်မ၀င်စား တော့ ကွန်ပျူတာနဲ့ နည်းပညာကောလိပ် ကိုလျှောက်ခဲ့တယ် .မတက်ခင် ကွန်ပျူတာကို ရပ်ကွက်ထဲက အကိုကြီးတစ်ယောက်စီမှာ DTP ကိုသင်ခဲ့တယ် ။ အဲကွန်ပျူတာကို ဘယ်တုန်းက စကိုင်ဖူးတာလဲဆိုတော့ ၉ တန်းတုန်းက ကျောင်းမှာ ကွန်ပျူတာ သင်တန်း ရှိတယ် ။ အဲတုန်းက Window 95 စက်တွေပေ့ါဗျာ။ အဲဒီတုန်းက ကွန်ပျူတာကိုသုံးတက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ဆရာမလစ်ရင်သုံးဖို့ဆိုပြီး ဂိမ်းတစ်ခုဖွင့်ပေးသွားတယ် ။ ကျွန်တော်ကလည်း တစ်ခါမှမသုံးဘူးတော့ ဟိုဟာနှိပ်ဒီဟာနှိပ် လုပ်နေတုန်း ဆရာမရောက်လာတော့ ဘာမှမလုပ်တတ်မပိတ်တတ်ဖြစ်နေတော့ အဆူခံလိုက်ရတယ် .. ကွန်ပျူတာမှီတော့ ကျောင်းအပ်တဲ့အချိန်မှာ စိတ်ကူးပြောင်းသွားသေးတယ်ဗျ ... နည်းပညာကောလိပ်မှာ MP ယူပြီး သဘောင်္လိုင်းဘက်ပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုပြီး ကျောင်းပြောင်းလျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ် ... အဲတင်ပြီးနောက်နေ့မှာ ၁၀ တန်းတုန်းက သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့တွေ့ပြီး ဒီကွန်ပျူတာမှာပဲ တက်ပါဆိုလို့ အဆွယ်ကောင်းပြီး နည်းပညာကောလိပ်မှာ ကျောင်းမအပ်တော့ပဲ ကွန်ပျူတာမှာပဲတက်ဖြစ်သွားခဲ့တယ် ... အဲလိုဟိုပြောင်းဒီပြောင်းကောင်းလွန်းတာ ပထမနှစ်စာမေးပွဲ ဖြေမှ ဒုက္ခရောက်တော့တယ်လေ ။ ဖြေရမယ့် သူစာရင်းမှာ ကျွန်တော်မပါလာလို့ မနည်းပါအောင်ပြန်လုပ်လိုက်ရတယ် ... :P နည်းပညာကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပြောတာကတော့ သူ့တို့ civil အတန်းမှာ ကျွန်တော့ နာမည် ရိုးကော ခေါ်တာကြားတယ်ပြောတာပဲ ... အဲလိုနဲ့ ကွန်ပျူတာပထမနှစ်မှာ စပ်ပလီ ၄ ဘာသာ ထိပါတယ် ။ ထိမှာပေါ့ ကျောင်းမှာဆရာမ က ရိုးကောခေါ်ပြီးတာနဲ့ အတန်းပြတင်းပေါက်ကခိုးထွက်ပြီး ဘောလုံးပဲသွားကန်နေတာကိုး ... ဒုတိယနှစ်ရောက်တော့ CT ဘာသာရပ်ကိုယူခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒုတိယနှစ်မှတော့ စပ်ပလီမရှိတော့ဘူး ။ ကျွန်တော်မဖြေနိုင်ပေမယ့် အောင်ခဲ့တယ် တစ်ကယ်နောက်ဆုံးက အောင်ခဲ့တာပါ ။ ဘာလိ်ု့လဲဆိုတော့ တက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံ ဘောလုံးပွဲမှာ ပါပြီး တစ်ဆင့်တက်သွားလို့ အောင်ခဲ့တာပါ ... :P ပထမနှစ်မှာတော့ ကျွန်တော်အပြင်သင်တန်းအနေနဲ့ C , C++ နဲ့ Visual Basic သင်တန်းတက်ခဲ့ပေမယ့် မလိုက်နိုင်ခဲ့ဘူး ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဒီလိုင်းနဲ့ မကိုက်ဘူးဆိုတာ သိခဲ့တယ် ။ အဲဒါကြောင့်လည်း ဒုတိယနှစ်မှာ CT ကိုယူခဲ့တာပါ ။ တတိယနှစ်လည်းရောက်တော့ ကျွန်တော် Networking သင်တန်းတက်ခဲ့တယ် ။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော် ဘာကို၀ါသနာပါလဲ သိခဲ့တယ် ။ ဆရာသင်တာလည်းကောင်းတာပါမယ်ထင်တယ်ဗျ ။ သူပြောတာတွေကို သေချာမှတ်မိနားလည်ခဲ့တယ် ။ အဲလိုတက်နေရင်းနဲ့ ကျောင်းနောက်ဆုံးစာမေးပွဲမဖြေခင်မှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ပေါ်လာခဲ့တယ် ။ ကွန်နက်ရှင်ကောင်းတဲ့ အင်တာနက်ဆိုင်မှာပေါ့ဗျာ ။ ကျွန်တော်ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ အကိုကြီးသူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က အလုပ်သွင်းပေးခဲ့တယ် ။ ကျွန်တော့်ကို Networking နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာတွေလုပ် ဘာတွေလေ့လာဆိုပြီး သင်ပေးခဲ့တယ် ။ အခုတော့ အဲဒီအကိုကြီးက စကာင်္ပူ မှာ Networking နဲ့အဆင်ပြေနေပြီဗျ ။ ကျွန်တော်ကတော့သူ့နောက်မှီဖို့အများကြီးလိုသေးတယ် ။ အခုထိ ဘာ certificate ကိ်ုမှလည်းရေရေရာရာမဖြေရသေးဘူး ။ vista တစ်ဘာသာပဲဖြေရသေးတယ် ။ အခုထိ ကိုယ့်ကိုယ်ကို Professional လို့လည်းမသတ်မှတ်ပါဘူး ။ တစ်ကယ့် Beginner သာသာ အခြေခံလောက်ပဲသိပါသေးတယ် ။
programming ကိုလိုက်တဲ့ Beginner တစ်ယောက်အတွက်ဆိုရင်ကော အတွေ့အကြုံဘယ်ကရနိုင်တုန်း ပြောပြပေးပါလား..
အရင်ဆုံး project သေးသေးလေးတွေ ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်ရေးကြည့်ပေါ့။ Library system လိုမျိုး လွယ်တဲ့ project သေးသေးလေးတွေ စရေးကြည့်ပါ။
ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ် မပြောခင် ကျွန်တော့်ရဲ့ ရဲဘော်တွေ အကြောင်း ပြောမယ်ဗျာ။
ပထမဆုံး အိမ်ကို ရောက်လာတဲ့ ရဲဘော်ကြီး (ကွန်ပျူတာ) ကတော့ Pentium MMX 200 MHz ပါ။ MMX ဆိုတာက အခုခေတ် 3D instruction တွေကို စီပီယူထဲ ထည့်ပြီး Atom ကွလို့ လုပ်သလိုပဲ အဲဒီခေတ် အဲဒီ အခါက အဆန်းဆုံးဖြစ်တဲ့ 2D Graphics, Multimedia (mp3, jpeg etc) တို့အတွက် လိုတဲ့ matrix ပေါင်းနှုတ်မြှောက်ပြောင်းပြန် (ဟုတ်ကဲ့ matrix က ပေါင်းနှုတ်မြှောက်စား မဟုတ်ပါဘူးဗျ၊ ပေါင်းနှုတ်မြှောက်ပြောင်းပြန်ပါ) instruction တွေကို CPU မှာ တပါတည်း တပ်ထားပေးလိုက်လို့ပါတဲ့ (80486 မှာကတည်းက FPU က စီပီယူထဲ ရောက်ပြီးသားပါ) အာပါး အံ့ချီးဖွယ်ပါလားပေါ့။ Windows 95 ဆိုတာကြီး run တာဗျ။ အဲဒါနဲ့ HTML အခြေခံ သင်တယ်။ စာရိုက်တယ်။ powerpoint လေ့လာတယ်။ excel သုံးတယ်။ memory ဆိုတာက ၃၂ မက်ကြီးများတောင် ပါတာဗျာ။ (နောက်တော့ ၂၀၀၂ လောက်ကျတော့ ၁၂၈ မက်ကို တိုးလိုက်တယ်။) graphic card က PCI slot မှာ စိုက်တာ မှတ်မိသေးတယ်။ sound card က ISA မှာ စိုက်တာဗျား (အခုခေတ် ကလေးတွေ မြင်ဖူးမယ် မထင်ဘူး) Graphic memory က ၂၄ မက်တဲ့။ HDD က ၂၀ ဂစ်ပဲလား ရှိတာ။ သိပ်မမှတ်မိတော့ဘူး။
အဲဒီကောင်နဲ့ ပရိုဂရမ်ရေးကျင့်ပြီး နိုင်ငံခြား ပြိုင်ပွဲ တစ်ခေါက်ရောက်လိုက်သေးတယ်။
ဒုတိယ ရဲဘော်ကြီးကတော့ တော်တော်မြင့်တယ်ဗျ။ P3 Celeron 1.3 GHz ပါ။ RAM ကို ၂၅၆ မက်တိတိ ၀ယ်ထည့်တာဗျ။ 3D card က ၆၄ မက်ပါတဲ့ Nvidia MX 400 chipset နဲ့ စုတ်စုတ်လေးပေါ့။ အဲဒီစက်က ကျွန်တော်နဲ့ ကီးကိုက်တယ်ဗျ။ ပိုက်ဆံ တော်တော် ရှာပေးခဲ့တယ်။ (ပရောဂျက်တွေ ရှဲဒိုးရေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။) တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဘာဂိမ်းမှ ဆော့မရ ဖြစ်လာတော့ စိတ်နာနာနဲ့ AMD processor သုံးတဲ့ တတိယ ရဲဘော်ကို ၀ယ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါတောင် သူ့လက်ကျန် CD/DVD/HDD တွေကို ယူသုံးတာဗျ။ ကျန်တဲ့ အခွံကိုတော့ ညီမ ၂ ၀မ်းကွဲကို အလကားပေးလိုက်တယ်။
တတိယကောင်ကတော့ လူကလဲ တော်တော် နပ်နေ၊ ပိုက်ဆံလဲ ပေါနေချိန်မှာ ၀ယ်တာဆိုတော့ အတော်လန်းပါတယ် (သူ့ခေတ် သူ့အခါကပေါ့) AMD Athalon 64 ဗျ။ ဖားတပိုင်း ငါးတပိုင်းကောင်။ 3D card ချည်းပဲ ၂ သိန်းနီးပါး ပေးရတယ်။ PCI-E ဆိုတာ ပေါ်ခါစ 256 မက်နဲ့ ATi card။ RAM ကို 512MB ထည့်တယ်။ ပန်ကာချည်းပဲ ၈ လုံးလားမသိ ပါတယ် (ပန်ကာတွေ လည်အားကျသွားတော့ တ၀ီ၀ီနဲ့ နားငြီးလိုက်တာဗျာ) သူ့ကို သယ်သွားလို့ မရတဲ့နေရာ သွားရတော့မယ်ဆိုတော့ ညီတော်မောင်ကို အစိမ်း ၅၀၀ နဲ့ ရောင်းခဲ့ရတယ်။ (ကျွန်တော် ရှုံးတယ်ဗျ။)
စတုတ္ထ ရဲဘော်ကတော့ Acer 5583(N) တဲ့။ Core2Duo T Series ဗျ။ (နံပါတ်မေ့သွားပါပြီ) memory က ၁ ဂစ်တိတိ ပါတယ်ဗျာ။ No 3D card ဗျ။ နောက်မှ ဆက်ရေးတော့မယ် ဗိုက်ဆာပြီ။ စက်တွေ beginner ကနေ pro ဖြစ်တဲ့အထိ ရေးမလို့ဟာ ...